गुरुमार्पाको टुँडिखेल कथा- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
आख्यान भन्छ, टुँडिखेल गुरुमार्पाको हो । हरेक फागुपूर्णिमा (होली) को रात एक मुरी चामलको भात र सिंगो राँगाको परिकार टुँडिखेलको एक्लो रुखमुनिका अदृश्य गुरुमार्पालाई अर्पण गरिन्छ । तर, सत्ता र सेना टुँडिखेलका ‘रक्षक’ गुरुमार्पा लखेट्न उद्यत छन् । रैथानेहरुको प्रश्न छ– कसको हो टुँडिखेल ?
भीमसेन थापाले सांस्कृतिक सम्पदा मासेर धराहरा उठाए, लगनमा विहार भत्काएर सिलखाना दरबार बनाए
चैत्र १४, २०७७ मल्ल के. सुन्दर
काठमाडौं शान्तिपार्क, दक्षिणतिर भोटाहिटी भएर बागबजार जाने मूलबाटोसँगैको खुला ठाउँ शंखधर पार्क हो । राजाको शासनमा त्यसलाई रत्नपार्क भनिन्थ्यो । सँगै जोडिएको चउरलाई खुलामञ्च बनाइएको छ । त्यसभन्दा पर अलि फराकिलो ठाउँ सैनिक मञ्च बन्यो । सहिदगेट सडकपारिको सिंगो भूमि नेपाली सेनाको एकलौटी अधीनस्थ क्षेत्र भयो । सेनाको मुख्यालय यसै परिसरमा खडा गरिएको छ । आखिर, कहाँ छ टुँडिखेल ?
सर्जनका रूपमा उपत्यकामा रहेका बेलायती हेनरी अम्ब्रसे आय्लफिल्डले सन् १८५० तिर रानीपोखरीदेखि दक्षिण हाल दशरथ रंगशाला त्रिपुरेश्वरसम्म फैलिएको टुँडिखेलको तेलचित्र बनाएका थिए, बेलायती रेसिडेन्सीका लागि । उनीभन्दा एक शताब्दीअघि सन् १७२० मा तिब्बतबाट काठमाडौं भएर भारत पुगेका इटालीका पादरी लिप्पोलिट्टोले पनि आफ्नो यात्रा वृत्तान्तमा टुँडिखेलको खुला क्षेत्रफलबारे उल्लेख गरेका थिए । उनको अनुमानमा त्यतिखेरको टुँडिखेल उत्तरबाट दक्षिणसम्म लगभग तीन माइल लम्बाइ फैलिएको थियो । तर, अहिले न त्यो विशाल स्वरूप रहिरह्यो, न टुँडिखेल टुँडिखेलको रूपमा रह्यो । वर्तमानसम्म आइपुग्दा टुँडिखेल हरायो ।
भीमसेन थापा जनरल बनेपछि उनले रैथानेहरूको बौद्ध धार्मिक केन्द्र गणविहार तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरू मासेर धराहरा उठाए, लगनमा विहार भत्काएर आफ्नो दरबार सिलखाना बनाए । त्यसै क्रममा सँगैको खुला चउर टुँडिखेललाई सैनिक छाउनी बनाए । पछि जंगबहादुरले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै विश्वयुद्धका लागि गोरखाली जवानहरू छनोट गर्न र प्रशिक्षणका लागि टुँडिखेलमा सैनिक परेड गराए । टुँडिखेलमाथि शासकबाट भएका अतिक्रमणका आरम्भ थिए ती ।
टुँडिखेल पूर्वतिरको एकछेउको खरीको बोटमा संगमरमरले सजाइएको चौतारो बनाएर त्यसको वरपर विश्वयुद्धमा वीरगति प्राप्त भिक्टोरिया क्रससहित सम्मानित गोरखाली सैनिकका मूर्तिहरू ठड्याएर राणा शासकले त्यसलाई सैनिकीकरण गर्ने कामको थालनी गरिसकेका थिए । पछि खरीको बोटको चौतारी राणा शासकहरूको औपचारिक घोषणाको थलो बन्यो । करिया मुक्तिको घोषणा पनि श्री ३ चन्द्रशमशेरले यही चौतारीमा उभिएर गरेका थिए ।
नयाँ सडक ढोकासँगै हाल नेपाल वायुसेवा निगमको भवन भएको ठाउँमा उत्तरबाट दक्षिणतिर लाम लगाएर सैनिक ब्यारेकहरू उठाइए । केही समयपछि टुँडिखेलकै दक्षिणी हिस्सालाई रंगशालातिर सैनिक प्रशिक्षणका लागि तारो हान्ने अभ्यास केन्द्रमा परिणत गरियो । आवास क्षेत्रबीच बन्दुक पड्काउँदै सैनिक अभ्यास गर्दा त्यसबाट पर्ने मानसिक असर र मानवीय क्षतिको अवस्थाबारे सेनालाई चिन्ता थिएन । बरु, सैनिक अभ्यासको सहजताका लागि नागरिकको स्वतन्त्र हिँडडुलमाथि नियन्त्रण गरिन्थ्यो । तारो हान्ने समय सदैव टुँडिखेल निषेधित क्षेत्र बन्थ्यो । सैनिक–प्रहरीले टुँडिखेलमा पाइला टेक्ने नागरिकलाई लौरो बोकेर लखेट्थे, भेट्टाए लगेर थुनामा हाल्थे ।
महेन्द्रको निरंकुश राजनीतिक कदमप्रति अनुमोदनस्वरूप बेलायत सरकारका तर्फबाट महारानी एलिजाबेथ द्वितीयाको राजकीय भ्रमण भएको थियो । उनकै स्वागत–सम्मानमा उपत्यका सजाउने क्रममा टुँडिखेललाई बारभित्र खुम्च्याइयो । त्यहाँ ढोकाहरू उठाइए । वाग्मती अञ्चलाधीशको सनकमा खुला टुँडिखेल खण्डित गरियो । हेर्दाहेर्दै टुँडिखेल रत्नपार्क, खुलामञ्च अनि शाही सैनिक मञ्चका रूपमा अतिक्रमित भयो । टुँडिखेल टुँडिखेलकै रूपमा रहेन ।
शाही सैनिक मञ्च बनेपछि सेनाले टुँडिखेललाई आफ्नो अधीनस्थ क्षेत्रकै रूपमा बुझ्यो, त्यसैखाले व्यवहार गर्दै लग्यो । सेनाले नागरिकका लागि टुँडिखेलभित्र पाइला टेक्न पाउने र नपाउने समय तालिका तोक्न थाल्यो ।
टुँडिखेलको दक्षिणतिर रंगशालासम्म चर्चिएको मैदानलाई त सेनाले आफ्नो बपौतिकै चार किल्ला ठान्यो । सेनाले खुला मैदान मासेर सैनिक मुख्यालयको संरचना मात्र बनाएन, स्थानीय निकायसँग लिनुपर्ने अनुमतिसमेत नलिई अनियन्त्रित निर्माण कार्य
गरिरह्यो । सार्वजनिक थलोमा अनावश्यक भौतिक संरचना ठड्याएर त्यसलाई व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गरिरह्यो । एक अर्थर्मा सत्ता र सैनिकको अतिक्रमणमा टुँडिखेल मासियो ।
टुँडिखेलमाथिको अतिक्रमणले सीमा नाघेको छ । तसर्थ नागरिक अभियन्ताहरू सामूहिक चिन्ता जाहेर गर्दै यसको संरक्षणका लागि सडकमा आए । गएको फागुन ७ गते बृहत् नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट सार्वजनिक नारा उठाए– टुँडिखेल कसको ? अभियन्ताहरूको सामूहिक बुझाइ छ, टुँडिखेल नागरिकको हो । त्यसैले त्यतिखेर टुँडिखेलवरपर प्रदर्शन गर्दै नारा घन्काए– टुँडिखेल नागरिकको हो ! फुटपाथे पसलेहरूको हूलहुज्जत, बसपार्कको तमासा अनि निर्माण कम्पनीहरूको बसाइले टुँडिखेलको अस्मितामाथि व्यंग्य गरिरहेको थियो । स्वाभाविक हो, यस्तोमा सबैको मनमा प्रश्न उठेको छ– टुँडिखेल कहाँ छ ? कसको हो टुँडिखेल ?
टुँडिखेल केवल मैदान होइन । लामो लोकआख्यानसँग गाँसिएको यो सम्पदाको संगम हो । मूर्त सम्पदाहरू भद्रकाली, बज्रवीर महांकाल, संकटा तथा द्वैमाजुको आराध्यस्थल टुँडिखेल परिसरकै अंग हुन् । टेबहालको लिच्छविकालीन बौद्धचैत्य पनि यहीं छ । सुन्धाराको अतिरिक्त यस मैदानवरपर थुप्रै ढुंगेधाराबाट पानी बहन्थ्यो । विभू बर्माद्वारा निर्मित सम्वत् ४५ अंकित कलात्मक ढुंगेधारा टुँडिखेलकै अंश थियो ।
अक्षय तृतीयाका दिन आरम्भ भई कुमारी षष्ठीका दिन सम्पन्न हुने रैथानेहरूको देवाली पूजाको स्थल यही टुँडिखेलको खुला स्थान हो । नगरवरपरको हजारौं परिवारका देवाली पूजाका मूर्तिहरू टुँडिखेलवरपर सजाइन्थे । सेनाको कब्जापछि त्यो अमूर्त संस्कार–संस्कृति अब लोप भयो ।
चैत्र कृष्णचतुर्दशीबाट काठमाडौंमा मनाइने पाहाँचह्रे पर्व मूलतः भद्रकाली र टुँडिखेलसँग सम्बन्धित जात्रा हो । औंसीको अपराह्न घोडा दौडाएर मनाइने जात्रा मूलतः टुँडिखेल केन्द्रित हो । लिच्छविहरूको नेपालमण्डल आगमनभन्दा धेरैअघिदेखि यो जात्रा मनाइन्थ्यो । टुँडिखेलको माथिल्लो भागदेखि पुच्छारसम्म हुने यो दौडमा घोडाको रफ्तार जति तीव्र हुन्थ्यो, त्यही गतिमा मुलुकमा सहकाल हुने स्थानीय आस्था थियो । धार्मिक–सांस्कृतिक रूपमा जात्राको यति महत्त्व थियो कि आराध्यदेवी कुमारी स्वयं जात्रा अवलोकन गर्न उपस्थित हुन्थिन् । दुःखको कुरा, जसरी टुँडिखेलको स्वामित्व अपहरणमा पर्‍यो, त्यसैगरी समुदायस्तरको त्यो संस्कृति पनि सेनाले बलात् कब्जा गर्‍यो । अहिले यसलाई घोडेजात्राको विकृत अर्थमा मनोरञ्जन र खेल तमासामा रूपान्तरण गरियो ।
थुप्रै ऐतिहासिक प्रसंगमा टुँडिखेलको चर्चा पाइन्छ । तर, यसको इतिहास–आरम्भ कहाँबाट भयो, त्यसको केही लिखत भेटिन्न । टुँडिखेल अर्थात् तिनख्यः नामकरण सम्बन्धमा पनि फरक–फरक कथन छन् । पं. बद्रीरत्न बज्राचार्यका अनुसार, वरपर धेरै रूखबिरुवा भई सीमसार क्षेत्रका रूपमा ओसिलो भएकाले स्थानीय भाषाबाट तुं ख्यः अर्थात् भास्सिने चउर भनिएको हो, त्यसैबाट तुंख्यः, टुँडिखेल नाम रहन गयो ।
विशेषतः काठमाडौंको सवलबहाल (मन्त्रसिद्धि विहार) का बज्राचार्यहरू टुँडिखेललाई आगं चपाः अर्थात् साधनागारका रूपमा लिन्छन् । त्यसै बहालका एक सिद्ध शाश्वत बज्रले नै सिद्धिबलबाट बज्रवीर महांकाललाई तल झारेर टुँडिखेल परिसरमा प्रतिस्थापना गरेका हुन् भनिन्छ । इतिहासविद् डा. गौतमबज्र बज्राचार्यको मत छ, नेवार भाषामा तु शब्दको अर्थ पूर्व दिशा हो, कान्तिपुर नगरको पूर्व दिशामा रहेको खुला मैदान भएकाले नै तुंख्यः भनिएको हो । एकथरी बौद्धहरू दाबी गर्छन्– हाल वायुसेवा निगम भवनको दक्षिणमा रहेको ठूलो रत्नत्रयायको चैत्य छ, सोही त्रिरत्नबाटै अपभ्रंश हुँदै तिनख्यः हुन पुगेको हो ।
केशचन्द्र, गुरुमार्पा र टुँडिखेल
संस्कृति–सम्पदाको समृद्धिसँग जोडिएर राजा भाष्करदेवको प्रसंग धेरै ठाउँमा आउँछ । त्योमध्ये पाटनको क्वाःबहाल अर्थात् हिरण्यवर्ण विहार (गोल्डेन टेम्पल) प्रमुख हो । सुन्दर, आकर्षक, कलात्मक भएकाले यो विहार विश्वमै प्रख्यात छ । भाष्करदेवले बनाएकाले यसलाई भाष्करवर्माकृत महाविहार पनि भनिन्छ । वंशावलीअनुसार यो विहार एघारौं शताब्दीको हो ।
उनैले काठमाडौंमा अर्को एक आकर्षक बौद्धविहार बनाउन लगाए, जुन कालान्तरमा इटुंबहालको रूपमा चिनियो । विशेषतः खुला प्रांगणका कारण पनि यो चर्चित छ । इतिहासकारहरूका अनुसार, भाष्करदेवले मूलतः सैन्य उद्देश्यबाट यस विहार बनाउन लगाएका थिए । यसलाई सैन्य किल्लाका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो भनिन्छ । भाष्करदेव कुनै भयानक रोग लागेर अल्पायुमै बिते । कसैले उनी निःसन्तान थिए भनेका छन्, कतिपयले केशचन्द्र उनकै छोरा हुन् भन्छन् । भाष्करदेवले काठमाडौंमा बनाएको विहार र केशचन्द्रको गहिरो सम्बन्ध छ । कालान्तरमा भाष्करदेवबाट निर्मित विहार जीर्ण भएपछि यिनै केशचन्द्रले त्यसको पुनर्निर्माण गरे भनिन्छ । तसर्थ उनकै नामबाट इटुंबहाललाई भाष्करदेव संस्कारित केशचन्द्र परावर्त महाविहार भनियो ।
केशचन्द्र सम्पन्न थिए र जुवाडे पनि । जुवा–लतमा भएभरको सम्पत्ति उडाए । पछि धनआर्जनका लागि भोटतिर लागे, फेरि धनाढ्य बने । आगलागीबाट ध्वस्त बनेको भाष्करदेव संस्कारित इटुंबहालको उनले पुनर्निर्माण गराए, जुन अहिले केशचन्द्र परावर्त महाविहारको नामबाट चिनिन्छ ।
स्वदेश फर्कंदा केशचन्द्रले भारी बोकाउन लगाएकामध्ये एक जना निकै बलिया व्यक्तिलाई सहयोगीका रूपमा घरमै राखे, तिनी थिए– गुरुमार्पा । गुरुमार्पा नरभक्षी थिए । उनी छरछिमेकका बालबच्चा चोरर खान पल्किए । नगरवासीको चर्को गुनासोपछि गुरुमार्पालाई मानवबस्ती बाहिर पठाउन केशचन्द्र बाध्य भए । तर, एउटा सहमति गरियो– नगरबस्तीबाहिर खुला स्थानमा गुरुमार्पाको बासस्थानको व्यवस्था गरिने र प्राणरक्षाका लागि जाँड, रक्सी, मासुसहित भरपेट दालभात खुवाउने । सोही सहमतिअनुसार गुरुमार्पाले आफ्ना लागि पाएको बासस्थान थियो– टुँडिखेलको खुला मैदान । आख्यान तथा रैथाने संस्कृति भन्छ, टुँडिखेल गुरुमार्पाको आश्रयस्थल हो । टुँडिखेल पूर्वतिर खडा एक्लो रूख गुरुमार्पाको बासस्थानको अर्थमा सांकेतिक रूपमा आज पनि संरक्षित छ ।
काठमाडौं, किलागलका किसानहरू बर्सेनि एउटा सांस्कृतिक पर्वका रूपमा गुरुमार्पालाई सम्झिन्छन् । कुनै कालखण्डमा गरिएको सहमतिको पालनास्वरूप केशचन्द्र विहारछेउको भूतुक्यबमा सिंगै राँगाको शरीरको विभिन्न अंगबाट ‘त्यापा जो’ अर्थात् चौरासी व्यञ्जन तयार पारिन्छ । एक मुरी चामलको भात पकाइन्छ । चोयाको ठूलो ढाकरमा एकातिर पन्ध्र पाथीको भात र अर्कोतिर सिंगो राँगोको मासुको परिकार तथा बाँकी पाँच पाथी चामलको भारी बनाएर एकै जनालाई बोक्न लगाइन्छ । बाजागाजासहितको किसानको टोली त्यो भारी कतै नबिसाई सिधै नयाँसडक ढोकाछेउ पुग्छ । यो सांस्कृतिक परम्परा मध्यरातमा सम्पन्न हुन्छ । भात र मासुका परिकार पहिले त्यहाँ अवस्थित गणेशलाई चढाइसकेपछि टोली सीधै टुँडिखेल छिर्छ र त्यही एक्लो रूखमुनि पुगेर एक मुरी चामलको भात र सिंगो राँगाको परिकार गुरुमार्पालाई अर्पण गरिन्छ ।
प्रत्येक वर्ष फागुपूर्णिमाको रात गुरुमार्पालाई यसरी नै सम्झने काम आजपर्यन्त हुँदै आएको छ । टुँडिखेल गुरुमार्पाकै हो भन्ने सहमति आज पनि रैथानेहरूले पालना गरिरहेका छन् । तर, सत्ता र सेना टुँडिखेलबाट गुरुमार्पालाई लखेट्न उद्यत छन् । अमूर्त संस्कृति र सम्पदा सधैंका लागि निम्ट्यान पार्न सत्ता उद्यत छ । यस्तोमा जनस्तरबाट प्रश्न उठछ– आखिर कसको हो टुँडिखेल ?
एक इमानदार आत्ममन्थन
अग्रजप्रति अनादरको भाव राख्ने प्रवृत्तिको बोलवाला भएको समयमा लेखकले आफ्ना कमजोरीको दोष–भार अर्काको काँधमा बिसाएर चोखिने यत्न गरेका छैनन्
पाण्डेको धारणामा पञ्चायती राजनीति राजा महेन्द्रको छुट्टै इतिहास रच्ने धुनको असफल परिणाम थियो
चैत्र १४, २०७७ विनोद सिजापती
निजामती सेवाबाट राजीनामा दिएर स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतमा लोकतन्त्र र मानवअधिकारमा चासो राख्ने डा. देवेन्द्रराज पाण्डेको आत्ममन्थन हो, ‘एक ज्यान दुई जुनी’ । विकासबारे अध्ययन–अनुसन्धानमा लाग्दै स्वतन्त्र व्यक्तिको पहिचान स्थापित गरेका पाण्डेको यो पुस्तक उनको जीवन यात्राको एकसरो वर्णन मात्रै होइन, यो त उनले देखेको नेपाली विकास, राजनीति र दातृ निकायको भूमिकाको सूक्ष्म वर्णन हो ।
पुस्तकमा उनले आफ्नाबारे चर्चामा रहेका केही पक्षको खुलासा गरेका छन्— सम्भ्रान्त परिवारको सदस्य भनेर आफूलाई भनिने गरिएको कथ्यको यथार्थ, प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापासँग झगडा गरेर अर्थसचिवको जागिर छाडेको भनिने बुझाइ र नागरिक आन्दोलनको अगुवा भएपछि आफूलाई लाग्ने गरेको माओवादी भएको आरोप ।
पाण्डेको पारिवारिक पृष्ठभूमि सम्भ्रान्त थिएन । उनको आफ्नो निवास थिएन । उनको जन्म ठूलीआमाको घरमा भएको थियो । आर्जेको इज्जत धान्न संघर्षरत पारिवारिक पृष्ठभूमिमा उनी हुर्किए । दरबार स्कुल हुँदै त्रिचन्द्र कलेजबाट स्नातक डिग्री प्राप्त गरुन्जेल पाण्डे औसत विद्यार्थी थिए । नेपालमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन नहुने बेला आमाले साइँलो छोरा पाण्डेलाई आफ्नो पेवा खर्चेर इलाहाबाद पढ्न पठाइन् । त्यहाँबाट २१ वर्षको उमेरमा वाणिज्य विषयमा स्नातकोत्तर सकेर फर्केपछि उनले आर्थिक योजना मन्त्रालयमा जुनियर रिसर्च अधिकृत (शाखा अधिकृतस्तरको) पदमा नियुक्ति पाए । यसरी सुरु भएको पाण्डेको कर्मचारी–यात्रा ४० वर्षको उमेरमा पेन्सन सुविधाबाट पनि विमुख भई स्वैच्छिक राजीनामासँगै सकियो ।
अर्थसचिवबाट उनको राजीनामा अर्थ मन्त्रालयको पनि जिम्मा लिएका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापासँगको मतभेदका कारण भएको थिएन । बहुचर्चित जनमतसंग्रहको सन्दर्भमा पञ्चायतलाई जिताउन प्रधानमन्त्रीले गर्न चाहेको राज्यकोष दुरुपयोग रोक्न नसकेकाले पनि भएको होइन रहेछ । ‘प्रधानमन्त्रीलाई रोकतोक नगरी सहयोग गर्नुस्, के–के हुन्छ दरबारलाई रिपोर्ट गर्नुस्’ भन्ने दरबारको आदेशका कारण उनले राजीनामा दिएका रहेछन् ।
निजामती सेवाकालमा पाण्डेले प्रशासकीय जिम्मेवारी बहन गरेर नियम–कानुनको परिधिमा रहनुपरेन । सेवा प्रवेशदेखि अन्त्यसम्मको प्रायः समय बजेट निर्माण तथा कतारो बाजेको भूमिकामा वैदेशिक सहयोग जुटाउन र सहयोग–समन्वयनमा बित्यो । कर्तव्यनिष्ठ, इमानदार तथा निःस्वार्थी उनलाई तत्कालीन हाकिम डा. भेषबहादुर थापाले प्रोत्साहन तथा हौसला मात्र दिएनन् । आत्मविश्वासका साथ निर्भीक भएर काम गर्न वातावरणसमेत मिलाइदिए ।
निजामती कर्मचारी हुँदै पाण्डेले विकास प्रक्रियाले गति लिन संस्थागत प्रणाली र संगठनात्मक व्यवस्थाको अपरिहार्यलाई मनन गरेका थिए । राजदरबारले स्थापना गरेको शक्तिशाली निकाय जाँचबुझ केन्द्रमा (जाबुके) मा पनि उनले काम गरे । १८ महिना जाबुकेमा छँदा जाबुके वा राजदरबारलाई नभएर सिंहदरबारको सबलीकरणमा उनी नीति निर्माणतर्फ अग्रसर रहे । त्यसका केही प्रतिनिधि उदाहरण किताबमा उनले समेटेका छन् ।
सहसचिव हुँदा पाण्डेले अमेरिकी सहयोगमा निर्माण गरिने भनेर प्रस्तावित नेपालगन्ज–सुर्खेत सडकलाई हामी आफैं बनाउँछौं भन्ने निर्णय लिए । सम्झौताको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेपछि अमेरिकी सरकारले सहयोग रकम घटाउने प्रस्ताव गर्‍यो । अनि उनले बिनापरामर्श अमेरिकी सहायता निगमका निर्देशकलाई भनिदिए, ‘तिम्रो सहयोग चाहिन्न ।’
अर्थसचिव हुँदा उनले तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रको अध्यक्षतामा स्थापित रोयल नेपाल सिपिङ कम्पनी देश हितमा नहुने देखेपछि तुहाइदिए । पञ्चायतकालीन कर्मचारी भए पनि उनले त्यति बेला केही दुस्साहसपूर्ण काम पनि गरे । जस्तो, राजा संवैधानिक हुन उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टलाई र जनमतसंग्रहका नाममा राष्ट्र बर्बाद हुनबाट रोक्न अनि बहुदल घोषणा गर्न आग्रह गरिदिन अर्का शक्तिशाली प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालाई अनुरोध गरेका थिए ।
पाण्डे गर्भमै छँदा उनका बाबु दुई जीउकी पत्नी तथा लालाबाला छाडेर बेलायतस्थित नेपाली राजदूत मालिकसिंह शमशेरका सहयोगी भएर बेलायत जानुपरेको थियो । त्यहीँ कार्यरत छँदा उनका पिताजी बिरामी भए । उपचारको साटो राजदूत सिंह शमशेरले एक्लै जहाज चढाएर उनलाई नेपाल फर्काइदिए । यही घटनाले हुन सक्छ, उनीभित्र विद्रोही स्वभावको टुसा उम्रिएको । त्यसो त उनले अमेरिकामा अध्ययनरत छँदा त्यहाँ भएको जातीय विभेदविरुद्धका आन्दोलनको प्रभाव पनि आफूमा परेको बताएका छन् ।
पुस्तकको दोस्रो खण्डलाई उनले ‘दोस्रो जुनी’ नाम दिएका छन् । निजामती सेवाबाट अवकाश लिएको केही दिनपछि नै डा. भेषबहादुर थापाले उनलाई इन्टिग्रेटेड डेभलेपमेन्ट सिस्टम (आईडीएस) मा आबद्ध हुन बोलाए । आईडीएसका तीन संस्थापक (भेषबहादुर, प्रकाशचन्द्र लोहनी तथा कुलशेखर शर्मा) मध्ये अमेरिकाको राजदूतमा थापाको नियुक्ति भयो । लोहनी राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचित भए । त्यसपछि पाण्डे आईडीएस प्रवेश गरे । त्यहाँ कार्यरत रहँदा उनले ‘काठमाडौं मानसिकता’ तथा नागरिकलाई तथ्यांकका रूपमा मात्र गन्ने नक्कली विकास प्रक्रियालाई त्यागे । अनि समानतामा आधारित समावेशी एवं सर्वाङ्गीण विकासप्रति अग्रसर भए ।
पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘मुलुकको अवस्थालाई अलि गहिरोसँग नियाल्ने, विकासको प्रयास र परिणामलाई नयाँ कोणबाट हेर्ने र क्रमशः मानवअधिकारकर्मी एवं बहुदलीय व्यवस्थाको प्रत्याशीसमेत हुँदै गएका नाताले पञ्चायती राजनीति र आर्थिक, सामाजिक वस्तुस्थितिबारे मैले आलोचना गर्नु सामान्य कार्य थियो ।’ यही बुझाइकै कारण उनी निजामती सेवाको राष्ट्रिय विकासका निमित्त सहयोग जुटाउने भूमिकाबाट रूपान्तरित भएर अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाजमा नेपाली नागरिकको उपस्थिति जनाउन क्रियाशील रहे । २०४६ को जनआन्दोलनमा नागरिक समाजको अभियन्ता एवं नेताका रूपमा उनको भूमिका स्थापित भयो । पञ्चायतको पतनपछि गठित अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी उनलाई सुम्पिइयो ।
पाण्डेको धारणामा पञ्चायती राजनीति राजा महेन्द्रको छुट्टै इतिहास रच्ने धुनको असफल परिणाम थियो । पञ्चायती राजनीतिप्रति उनको मूल्यांकन अनि राजाहरू महेन्द्र, वीरेन्द्र तथा ज्ञानेन्द्रसम्बन्धी उनका धारणा मौलिक छन् । राजाले आफू हाबी हुने अभिप्रायले रचेको पञ्चायती राजनीति अलोकतान्त्रिक थियो । महेन्द्रलाई उनले राजाभन्दा राजनीतिक नेताका रूपमा बुझ्नुपर्ने भनेका छन् । वीरेन्द्रलाई ‘सरल स्वभावका पिता’ भन्दा ‘लोकतान्त्रिक’ मानेका छन् । ज्ञानेन्द्रलाई भने उनी स्वार्थी–लोभी व्यापारी मान्छन् । पाण्डेको मतमा— तीनै जना राजामा देशको अभिभावक भएर संवैधानिक परिधिमा रहने मनसायको प्रचुर अभाव थियो । आफ्नो अभीष्टसिद्धिका लागि मात्र उनीहरूले राष्ट्रलाई उपयोग गरेका थिए ।
बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रतिको लगावले नेपाली कांग्रेसका नेतासँग उनको सामीप्य बढेको देखिन्छ । कांग्रेसभित्रको नीतिगत विचार–विमर्शको रिक्तता पूर्ति तथा छोरीको व्यवस्थापन गर्न पाण्डेले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अनुरोध गरेका थिए । त्यसैगरी उनले गणेशमान सिंहलाई पार्टीको राजनीतिक दायराबाट माथि उठेर समग्र समाजमा लोकतान्त्रिक संस्कृति र आचरण प्रवर्द्धन अभियान चलाउन सुझाएका थिए । कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पञ्चायती संस्कृतिले निरन्तरता पाएकोमा धेरैपटक सजग हुन भनेका थिए । तर उल्टै उनले गिरिजाप्रसादबाट ‘माओवादी’ तथा गणेशमानबाट ‘दम्भी’को उपाधि पाए । त्यसपछिका दिनमा उनमा कांग्रेसप्रति नै वितृष्णा जाग्यो । वैकल्पिक वामपन्थी लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्ति निर्माण प्रयासस्वरूप उनले लोकदल स्थापना पनि गरे । भलै तीव्र गतिमा ओरालो लागेको राजनीतिक मूल्य–मान्यताको धरातलमा त्यस्तो आदर्शवादी दल खडा हुन सकेन ।
माओवादीलाई हिंसा त्यागेर शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन उनले गरेको अथक प्रयास पुस्तक पढ्दा छर्लङ्ग हुन्छ । दिल्लीमा भएको पुष्पकमल दाहालसँगको पहिलो भेटमा उनले अब हतियार बिसाएर मूलधार–राजनीतिमा आउनुको विकल्प नभएको धारणा राखे । बरोबर माओवादी नेतासँग नागरिक समाजको प्रतिनिधिका हैसियतले उनको भेट हुन्थ्यो । हिंसा त्यागेर काठमाडौं छिरेका पुष्पकमल–बाबुरामलाई उनले लडाकु तथा कार्यकर्ताको भविष्यप्रति सजग हुँदै उनीहरूलाई तालिम दिन पनि सुझाएका थिए । आठ राजनीतिक दल तथा माओवादीबीचको आठबुँदे समझदारीपूर्वको वार्तामा आफूलाई सामेल नगरेकोमा पाण्डेले गुनासो पनि गरेका छन् ।
पाण्डे आफूलाई प्रयोजनवादी मान्छन् । पुस्तक पढ्दा पनि थाहा हुन्छ— निर्धारित उद्देश्य प्राप्तितिर प्रेरित नभई आइपरेका चुनौती तथा अवसरतिर केन्द्रित छन् । र, उनी आफ्नो काममा कर्तव्यनिष्ठ एवं लगनशील भएर तिनको सम्बोधन गर्दै अघि बढ्छन् । प्रक्रियागत अलमल नरुचाउने परिणाममुखी चारित्रिक विशेषता उनमा देखिन्छ ।
त्यसैले उनले अनुकूल वा विपरीत परिस्थितिमा पनि आफ्ना आदर्श, मूल्यमान्यता तथा स्वाभिमानको सौदागिरी कहिल्यै गरेनन् ।
पुस्तकमा पाण्डेले आफ्ना विचारसँग मात्रै पाठकलाई परिचित तुल्याउँदैनन्, मुलुकको आठ दशक लामो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अवस्थाको बिम्ब पनि प्रस्तुत गर्छन् । विगतको राजनीतिले समावेशिता, समानता तथा नागरिकका आकांक्षा समेट्न नसक्दा नै राष्ट्रले अहिलेको नियति भोगेको पाण्डेको निष्कर्ष छ । समकालीन नेतृत्वले पनि विगतको रुग्ण चरित्र पछ्याएकोमा उनको घोर आपत्ति छ ।
विकास–अवधारणाको विस्तृत व्याख्याले पुस्तकको आकार बढाएको छ । स्वावलम्बन अभियानबारे पाठकलाई बोध गराउने हेतुले गरिएको वर्णन नीरस र लामो छ । जुन प्रकारले पुस्तकमा त्यस अभियानको महत्त्व, हासिल भएका उपलब्धिका आधारमा राष्ट्रव्यापी रूपमा स्वावलम्बन अभियान कार्यान्वयनको वकालत गरिएको छ, त्यसलाई विस्तार गरे अर्को पुस्तक सहजै बन्न सक्छ । यहाँ वर्णित राजनीतिक तथा विकाससम्बन्धी पाण्डेको धारणाले अर्को उच्चकोटिको पुस्तक पनि माग गर्छ ।
पूर्वपञ्च, प्रशासक, सुरक्षा अधिकारी, शिक्षक, पत्रकार, माओवादी लडाकुलगायत अन्य राजनीतिकर्मी आदिका जीवनी, आत्मवृत्तान्त/आत्मकथाभन्दा ‘एक ज्यान दुई जुनी’ बिलकुल फरक छ । लेखकले पुस्तकमा आफ्नो योगदानको प्रशंसामा समय खेर फालेका छैनन् । न आत्मकेन्द्रित नै भएका छन् । अग्रजप्रति अनादरको भाव राख्ने प्रवृत्तिको बोलवाला भएको समयमा उनले आफ्ना कमजोरीको दोषको भार अर्काको काँधमा बिसाएर आफू चोखिने यत्न पनि गरेका छैनन् ।
धेरै अर्थमा यो किताब एक इमानदार आदर्शवादी नागरिकको इमानदार आत्ममन्थन हो । विशेषगरी निजामती कर्मचारी तथा युवाका निम्ति पुस्तक प्रेरणादायी छ । सर्वसाधारण, विकासे कार्यकर्ता, नागरिक अभियन्ता तथा राजनीतिकर्मीका निमित्त पनि किताब मार्गदर्शक छ ।
प्रकाशित : चैत्र १४, २०७७ १०:३६